Anyị ga-emekọrịta ọnụ! | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulAnyị ga-emekọrịta ọnụ!
22 / 03 / 2020 34 Istanbul, IETT, General, Ụzọ Awara Awara, oru, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
anyị ga-eme nke ọma
Onye isi obodo Metropolitan (IMM) Onye isi ala Ekrem Imamoglu kwuru, "Anyị ga-eme nke ọma." Ọ kpọrọ ndị bi na Istanbul, karịsịa ụmụ amaala agadi, ka ha nọrọ n'ụlọ ha. Onye isi ụlọ ọrụ IETT dekwara okwu onye isi ala na bọs ndị ahụ: Anyị ga-aga nke ọma!
Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo Istanbul Metropolitan Municipality (İBB), kwagara na etiti ụlọ na Saraçhane iji gaa n'ihu n'ọrụ ya mgbe ihe omume ahụ mere na Üsküdar n'ehihie. Mamoğlu mechara withụrịa na ndị ọrụ ya, usoro teleconference, İmamoğlu bịara n’ihu igwefoto ndị ahụ. İmamoğlu nyere ndị bi na Istanbul ozi dị mkpa na akụkọ mgbasa ozi ya na İBB TV. “Taa, agara m Üsküdar n'enweghị ịgwa onye ọ bụla ka ọ hụ nnukwu ego nke İSKİ maka Üsküdar. Ọ bụrụgodi na okporo ụzọ dịpụrụ adịpụ karịa mgbe ọ bụla, a ka nwere ndị mmadụ ka ga-eche. Ihe a ezighi ezi. Emela ihe a. Nọdụ ala na mbara ihu gị. Mepee windo gị, kpachara ụlọ gị. Anyị na-etinye ibe anyị n'oké ihe egwu site na ịpụ, ọkachasị site n'itinye mpaghara buru ibu. Karịsịa ụmụ amaala ibe m dị afọ 60 na karịa; biko gee ntị n’okwu anyị. ”
“ILM ,AKA, ana m ahụ unu ka unu na-elekọta ụlọ”
“Alsomụ m hụrụ n'anya; Echere m na ị na-agwụ ike n'ụlọ. N’ezie, ị nwere ikike igwu egwuregwu, mana ka anyị ghara ileghara ihe ọmụmụ anyị anya. Ka anyị gụọ ọtụtụ akwụkwọ. Ka anyị ghara ịmakụ nne na nna anyị ochie na nne na nna anyị ochie nwa oge. Nke a dị ezigbo mkpa maka ma gị ma ahụike ha. Anyị chọrọ ka iwe ghara iwe gị taa. Anyị siri, 'Anyị ga-eme nke ọma.' Imekọrita ọnụ; Anyị ga na-arụkọ ọrụ, anyị ga-agbakọ mbọ ọnụ. Ee; Citizensmụ amaala ibe m, ndị torola ogologo oge, ga-agwụ ike n'ụlọ. Mana ihe merenụ, ekwela ka anyị kpasuo ụbọchị ndị a iwe, ka anyị kpachapụ anya. Maka ugbu a, biko nọrọ n'ụlọ. Ahụrụ m unu niile n'anya. Chukwu gozie anyi nile. Ekene m aka gị, ndị okenye anyị. Ekele diri unu niile. Echere m na a natara ndị ntorobịa ozi m. Ysmụnwoke, m na-esusu gị niile n’anya gị. Achọrọ m ka ụbọchị niile gbasie ike. Anyị ga-emekọ ya ọnụ. ”
Director IETT General Directorate, nke mere ihe mgbe ozi nke İBB Onye isi ala Erkem İmamo “lu “anyị ga-eme nke ọma,” bipụtara ozi a “Anyị Ga-emekọ Ihe Ọnụ!” N'elu bọs ndị dị n'ụgbọ agha ya. A ga-agbakwunye akwụkwọ anamachọihe na Nzuzo Ọha Onwe.
E mechiri saịtị ahụ na garla akụkọ ihe mere eme
A ghaghị ịtụle Basin na Ladik ọnụ na Atụmatụ Nlegharị Njem
Ndị obodo na ndị obodo na-arụkọ ọnụ ụzọ
Bosphorus na Marmaray na-agafe na 2 nkeji
Ụgbọ okporo ígwè na Bergama na North Aegean Port
Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 2013, Marmaray bu ụzọ ụgbọ elu Ankara-Istanbul na-agba ọsọ ọsọ.
Nounma ọkwa: Ngwongwo ngwongwo 10 (ya na ihe ...
Anma ọkwa okike: 5 ụgbọ oloko dị oke elu nke edobere pasenti ise…
Minista Binali Yıldırım: Ankara-Istanbul High Speed ​​Train at 2013 to Open with Marmaray
Ntube Iran na Czech nyere 'ọrụ ọnụ' na TCDD
Onye Minista Turhan Kwuwaara! Turkey Nọrọ n'ụlọ ọ Services Business N'ime Internet
Egoputara sistemu nke na - emebi ego Ego n’ime ATM